အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 လင်းယုန် Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 လင်းယုန် Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo သြဂုတ်လ 17, 2016
တက်တူးထိုးခြင်း၏အနုပညာသညျလူသားတို့အားဖြင့်အထဲကထင်ခဲ့ရှေးအကျဆုံးအနုပညာပုံစံတဦးဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါအနုပညာကအသုံးပြုသည်အဘယ်အရာကိုပေါ် မူတည်. စကားရပ်သို့မဟုတ်ပုန်ကန်မှုလုပ်ရပ်တစ်ခုပုံစံဖြစ်လာသည်။ အဆင်တန်ဆာတစ်ခုပုံစံအဖြစ်တက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်သူတွေကိုလည်းရှိပါတယ်။
လင်းယုန် Tattoo ဒီဇိုင်း၏အဓိပ်ပာယျသငျသညျကိုသိရန်ကိုချစ်မယ်လို့တစ်ခုခုပါပဲ။ အဆိုပါတက်တူးအတူပါလာသည်ဟုမြောက်မြားစွာအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ အဆိုပါ #eagle ကမ္ဘာတဝှမ်း gloried ခဲ့ပြီးသီလကပူးတွဲသောငှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခွန်အားကိုအခွင့်အလမ်း, ပညာ, လွတ်လပ်မှု, virility နှင့်ပုလ်, ပါဝါ, လွှမ်းမိုး, အခွင့်အလမ်း, ဘုရားတမန်များနှင့်ဝိညာဉ်ရေးဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဒါဟာအာဏာကိုအများကြီးမှဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကထူးခြားတဲ့သူ့ရဲ့ Dominic သြဇာလွှမ်းမိုးမှုန်းကျင်ခံစားခဲ့ရနှင့်အတူစေသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်များအတူပါလာသည်ဟုရွှေလင်းတ၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲရှိပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရွှေလင်းတဆွေးနွေးပွဲများ၏အတောင်ပံ။ သငျသညျလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအဘို့အသွားနိုင် inking တဦးသည်ရွှေလင်းတတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ ကလူအများကြီးကိုမကောင်းသောအပယ်သွားဂရုမစိုက်ဖို့က၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်အဘယ်ကြောင့်ကမ်းလှမ်းအဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေလင်းတ #tattoo ၏ပုံဆွဲသူကနှင့်တကွကြွလာအဓိပ္ပါယ်ကိုအပြည့်အဝသိသာကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်။ ဒါကြောင့်လူကြိုက်များနှင့်လည်းရှားပါးသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်၏ရှားပါးကမ္ဘာတဝှမ်းတန်ဖိုးထားသောအရာတစ်ခုခုသည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှပူးတွဲတန်ခိုးအာနုဘော်များသိသိသာသာကိုယ်စားပြုမှုရှိချင်လျှင်, လင်းယုန်တက်တူးထိုးကြောင်းကိုယ်စားပြုမှုစေလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လင်းယုန်တက်တူးထိုးလူတွေကမ္ဘာအနှံ့ကနေအသုံးပြုမှုလုပ်နေပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်။ သင်တစ်ဦးဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးလျှင်လင်းယုန်တက်တူးထိုးထားတဲ့အနုပညာနိုင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သောလင်းယုန်တက်တူးထိုးလူအများစုမပါဘဲမပွုနိုငျသောငါတို့နေ့တိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်လာကြပါပြီ။
သင်ဤကဲ့သို့သောရွှေလင်းတတက်တူးထိုးရှိသည်ဖို့လိုလျှင်, သင်ပြုတယ်သောပထမဦးဆုံးအရာဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်သူတစ်ဦးကောင်းသောအနုပညာရှင် get ဖြစ်ပါတယ်။
ကလူအများကြီးကဒီရွှေလင်းတတက်တူးထိုးခြင်းနှင့်တကွသင်ကူညီပေးပါမည်သူကိုမှထွက်ရှိရှိပါသည်။ ဖက်ရှင်အကြောင်းနားလည်တဲ့ဖြစ်ကြပြီးရွှေလင်းတတက်တူး၏မိတ်ဆွေတို့ကိုအမြဲလင်းယုန်တက်တူး drawing အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အသွားသူကလူတွေအများအပြား။
ပန်းပွင့် & လင်းယုန် Tattoo
ဒါကြောင့်ရွှေလင်းတတက်တူးထိုးမှကြွလာသောအခါသင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး timer နေရာမှာမကျမည်အကြောင်းဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်ကကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။
လင်းယုန်တက်တူးထိုးလှပသောဖြစ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်သင်ကသင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့မတိုင်မီလိုချင်တာတွေကြောင်းကိုသေချာဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါအမြဲတမ်းရွှေလင်းတတက်တူးအများဆုံးလူများအတွက်သွားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်လာသည်။ သင်တစ်ဦးအမြဲတမ်းရွှေလင်းတတက်တူးထိုးဘို့အသွားရမယ်လျှင်, သင်တို့ကိုသင်တို့အပေါ်မှာရွှေလင်းတတက်တူးထိုးဆှဲမညျသူကျွမ်းကျင်သူတွေ့ဆုံရန်အရေးကြီးပါသည်
တက်တူးတစ်ဦးမှော်သင်္ကေတအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြခြင်းနှင့်မျိုးပွား, မွငျ့မွတျ, ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အများကြီးပိုပြီးအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုထားပြီးအချိန်ရှိခဲ့သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပခုံး Blade ကိုလင်းယုန်တက်တူး
လင်းယုန်တက်တူးထိုးတန်ခိုးတော်နှင့်လွတ်လပ်မှုရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာကြပါပြီကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများအတွက်လာပါတယ်။ အမေရိကတိုက်မှာ, ကျနော်တို့မကြာခဏလူတွေအများကြီးပေါ်မှာမြင်သောအလွန်အထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဤဒီဇိုင်းဘယ်လိုထင်သလဲ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
အဆိုပါပေါင်တက်တူးထိုးသင်ရှာနေကြသည်ကိုဝါကြွားကြောင်းကိုသင်၏လင်းယုန်ပေးသေချာ၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်ကပန်းပွင့်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ရွှေလင်းတကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းသို့ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်နှင့်ဤကဤကဲ့သို့သောရေးဆွဲသောအခါသင်သည်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ အဘယ်အရာကိုသင်ဤတက်တူးထိုးအကြောင်းကိုကြိုက်သလဲ? ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့ကြောင့်အပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝရေးဆွဲရွှေလင်းတနှင့်အတူရဲလုပ်ပါ။ သင်အားကြီးသောရွှေလင်းတနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ရန်မအဆုံးလည်းမရှိ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
combo လင်းယုန် Tattoo
အဆိုပါ combo ရွှေလင်းတတက်တူးထိုးဤကဲ့သို့သောအခြားအပုံစံမျိုးစုံနဲ့တွဲပြီးရွှေလင်းတဆွဲနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကတချို့ဖက်ရှင်အကြောင်းနားလည်တဲ့လူတို့သညျဤသည်နေ့ရက်ကာလလုပ်နေတာကဘာလဲ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာရွှေလင်းတတို့သည်အနုပညာရှင် '' မျက်စိကနေထွက်ပေါက်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ဟာသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာကောင်းသောဖြစ်ကြပြီးသင်သည်လည်းသင်၏အလင်းယုန်တက်တူးထိုးနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်လက်ရာစေနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လင်းယုန်တက်တူးထိုးရရန်အဘို့အဘယ်အရာကိုသင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပိုပြီးလင်းယုန် Tattoo ဒီဇိုင်းအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
မျက်စိတက်တူးFeather Tattooဂျီဩမေတြီ Tattoosကျောက်ဆူးတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးချစ်စရာတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးစုံတွဲတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးစိန်တက်တူးKoi ငါးတက်တူးနေရောင်တက်တူးနှလုံး Tattoosပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးအစ်မတက်တူးခြေကျင်း Tattoosကငျးမွီးကောတက်တူးလက်တက်တူးလက်မောင်းတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးလက်တက်တူးလတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးဆင်တက်တူးမြှားတက်တူးတက်တူးထmehndi ဒီဇိုင်းကြောင်တက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးပန်းချီတက်တူးဟင်္တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးခြေလျင်တက်တူးငှက်တက်တူးဂီတတက်တူးrip တက်တူး